Torohevitra: Ahoana ny fanovana ny Agent Agent Chromium? | Avy amin'ny Linux
Efa hitantsika ny fomba fanovana ny Agent Agent Firefox y Opera ary izao dia anjaran'ny chrome, izay ampiasako matetika satria Firefox 8 mandany ny RAMako io.
Misy izany fanitarana mamela anao hanao izany, fa noho ny fameperana napetrany Google (ireo renim-pianakaviana mihitsy) a Kiobà Tsy azoko izy ireo ka tsy maintsy ataoko amin'ny tanana.
Manitsy ny fisie noho izany izahay /usr/share/applications/chromium.desktop ary tadiavinay ilay andalana milaza hoe:
Ary apetrakay toy izao:
Raha manokatra takelaka isika ary mametraka:
Afaka mahita ny Agent Agent izay mihoatra na latsaka amiko dia tokony ho toy izao:
Raha ampitahanao amin'ny tsipika navelako etsy ambony dia ho hitanao fa nanampy aho Debian ary nosoloiko Chrome ny chrome.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Torohevitra: Ahoana ny fanovana ny Agent Agent Chromium?
Fantatrao ve hoe inona ilay fanitarana Google, ekeko fa zanaky ny reny ratsy izy ireo, mba hanamorana ny asa, hahahaha, ary amin'ny fizarana inona no anananao ny Firefox 8?
Tsy tadidiko izao ny anaran'ny fanitarana. Ary ny Firefox 8 ho an'i Debian, miaraka amin'ny tar.gz
Tix dia hoy izy:
Amin'io làlana io (/usr/share/applications/chromium.desktop) tsy mahita na inona na inona aho, hita fa miasa ho an'ny fizarana manokana fotsiny izy, mitovy ihany ny fiasa ao amin'ny LMDE ao amin'ny Mint 12 ary heveriko fa ho an'ny Ubuntu sy Kubuntu ihany koa.
Mamaly an'i Tix
Angamba ao amin'ny Ubuntu dia manova ny anaran'ny .desktop izy io, fa amin'ny ankapobeny dia ao daholo ireo rindranasa miseho ao amin'ny menio. Mikaroha tsara, mety hoe chrome na farihy toa an'io.
Ao amin'ny Ubuntu dia eo amin'ny làlana voatondro ao amin'ny paositra ihany no tsindrio eo amin'ny kisary, ary hisokatra miaraka amin'ny kwrite (tranga misy ahy) izy io, ary mitady ny tsipika ianao, novaiko izy io ary nijanona ny chromium, satria naveriko ny soatoavina araka ny hitako azy ireo.
Izaho dia ao amin'ny Mint 12 RC.
120MB miampy 54,9mb miampy 46mb miampy 41mb miampy 33mb dia ataovy 294,9mb ny totaliny ary vakira 3 fotsiny no misokatra
ary miakatra arakaraka ny fanaraha-maso ny rafitra. Noho izany dia mahafoy an'i Chromium aho ary manandrana browser hafa izay tsy dia kely vampira intsony.
Nijery tsara aho ary tsy nahita na inona na inona toy ny chromium.desktop, na izany aza misaotra.
Tsy nahita na inona na inona koa aho .. ao amin'ny Linux mint 12 aho
Chromium mandany RAM mihoatra ny Firefox?
Izy ireo dia mandany zavatra mitovy amin'ny tabilao mitovy, mahita ny pejy mitovy, miaraka amin'ny configurations mitovy ary miaraka amin'ny plugins mitovy na farafaharatsiny.
@hipersayan_x, misaotra tamin'ny tendrony.
Ao amin'ny Kubuntu 11.10, miaraka amin'ny Firefox 14, miaraka amin'ny valan'orinasa 74 (eny, efatra amby fitopolo), dia mandany RAM mitovy amin'ny Chromium amin'ny 20-22 ihany aho… Ary raha manokatra Chromium mihoatra ny 25 aho dia efa lasa miadana be.
Toy izany koa ao amin'ny Mint, mikapoka an'i Chromium i Firefox.
Raha ny amiko, farafaharatsiny, TSY marina fa mihinana zavatra mitovy amin'ny tabilao misokatra ihany izy ireo. Raha ilaina dia manome sary sy data aho.
Raha lazaina amin'ny teny hafa dia aleoko ny Firefox sy ny fanitarana maro be ao aminy. Ho an'ny zavatra manokana dia mampiasa Chromium aho.
Marina fa mijery an-kolaka aho, tsy mahalala olona manokatra kiheba be loatra. Raha mila volomaso 3 na 4 fotsiny ianao dia mety hanao izany i Chromium.
Fa efa niresaka an'izany tany an-kafa izahay.
74 kiheba, ok.
"Tsy mahalala olona manokatra kiheba be aho"... hehehe, aleoko tsy miteny na inona na inona, azo antoka elav (ny admin hafa izay niasa tao amin'ny orinasa mitovy amiko ihany) hiteny toy izao: «Eny! ity iray ity (manondro ahy) dia manokatra takelaka be dia be ka tsy mamela bandwidth ho ahy »… na zavatra toa izany HAHAHA.
Tsy misy na inona na inona, mbola manokatra tabilao be dia be aho, satria rehefa misokatra izy ireo dia efa mamaky antsokosoko sahady aho ary manidy azy ireo aho ... ary maro kosa ireo mbola tsy nahavita namarana.
Etsy andanin'izany (tsy mahalala fomba aho haha) ... tongasoa eto amin'ny bilaogy 🙂
Manantena aho fa hahita zavatra mahaliana eto ... na dia mpampiasa KDE aza ianao dia manome toky anao fa hahita zavatra maro izay tianao 😉
OK, misaotra anao.
Tandremo anefa fa bandy aho, fanafohezana i aliana.
(Matetika rehefa hazavaiko io dia tsy haiko ny antony manova ny feo sariaka ho an'ny tsy miandany).
Oad hahahahaha miala tsiny amin'ny tsy fahazoan-kevitra hahahaha.
Tsy misy, fahafinaretana ihany koa ny fananako anao eto sakaiza, ary averiko izay nolazaiko ... raha tianao ny KDE, eto dia hahita zavatra mahaliana maro ianao hahaha 🙂
Miarahaba antsika ary tongasoa ato amin'ny bilaogy 😉
elav mbola manana Chromium v14 ihany ianao… wow…
Eny, ary? Izy io dia miasa amin'ny fahagagana ho an'ny Chromium v14. Raha ny marina dia tsy mahita fahasamihafana amin'ny Chrome 15 afa-tsy ny takelaka misy azy aho.
sdaf2 dia hoy izy:
Raha tsy mety aminao izany dia andramo ovaina ny solotenan'ny mpampiasa amin'ny chrome / chromium miaraka amin'ity fomba ity, haingana sy mora. http://buildall.wordpress.com/2011/05/24/changing-google-chrome-user-agent-string-in-ubuntu-11-04/
Valio ny sdaf2
Tsy mandeha amiko i Verroo na mbola tsy haiko ny manao azy: S
Afaka miasa ho an'ny chrome google koa ve ity?
ahahaa tsy afaka nanao xD mihitsy aho
Chino dia hoy izy:
Valiny amin'ny Sinoa
Manandrana hatrany aho
Tsy azoko izay mitranga 🙁 Napetrako ity
Azafady mba ahitsiho aho raha misy zavatra tsy mety 🙁
Miaraka amin'izany, tsy hitanao akory ny sary famantarana Mint amin'ny sora-baventy bilaogy? (Zoro ambony havanana)
tsy misy na inona na inona 🙁
Google chrome no ampiasako .. afaka mampiasa fanampiana kely aho
Uff, nanandrana azy io tamin'ny Chromium aho (tsy manana Chrome) ary niasa ho toy ny ody fiaro O_O... avelao aho hanadihady kely hahitako izay hitako.
ataovy alohan'ny hamotopotorana .. avelao aloha hamono ny fisalasalana isika, sao sanatria hanao ratsy aho ..
Taiza no nalehanao nanamboarana an'io? nanokatra chromium ianao ary inona no nataonao?
Nanokatra terminal aho ary nametraka an'ity:
Tsy misy zavatra hafa 🙂
Andramo izany hahitanao izay valiny omeny anao 😀
tsy misy zava-mitranga .. Napetrako tao amin'ny terminal izany ary avy eo dia nosokafana ho ahy ny varavarankely google chrome vaovao .. saingy mbola tsy miseho amin'ny mpampiasa azy
Miangavy amin'ireto avy amin'ny Google ireto ... ¬_¬
Izay no tsy ampiasako Chrome ary mampiasa Chromium aho ...
ajajaj ny zavatra hafahafa dia ny nanaovako ny fanovana ny firefox araka ny asehon'ny tutorial hafa .. ary toa tsara izany, mampiseho amiko ny logo linux mint sy ny zavatra hafa rehetra fa tsy misy chromium sy chrome mihitsy
hey apetrako ao amin'ny terminal izany:
chromium –user-agents = »Mozilla / 5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit / 535.1 (KHTML, toa an'i Gecko) Linux Mint 12 Chrome / 17.0.963.79 Safari / 535.1 ″% U
Ary hoy izy tamiko:
chromium: baiko tsy hita
Raha tokony hasiana chromium / usr / bin / chromium ... dia io Mint ¬_¬ ...
ahahaha hihomehy kely ianao ... jereo izay lazainy amiko izao:
bash: / usr / bin / chromium: Tsy misy ilay rakitra na lahatahiry
WTF !!! … Andramo / usr / bin / chromium-browser raha te hijery
Ok apetrako araka izay nolazainao tamiko:
/ usr / bin / chromium-browser –user-agents = »Mozilla / 5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit / 535.1 (KHTML, toa an'i Gecko) Linux Mint 12 Chrome / 17.0.963.79 Safari / 535.1 ″%
Ary jereo ny fomba ahazoako ny mpisera mpampiasa
Ubuntu O_O…. Ankehitriny dia miala aho ...
Tsy haiko akory izay distro ampiasainao ... LOL !!
Angamba azonao apetraka ao amin'ny / etc / chromium / default na zavatra toy izany ... lany hevitra aho, amin'ny Debian dia mety amiko 0_0
HALLELUJAH !! \_ O / \_ Ø / \_ O / \_ Ø / -> Efa nahatanteraka azy aho that dia ny tsipelina diso tsipelina nataoko chromium ejejeje MISAOTRA ANAO
Izao fotsiny aho mila mametraka sary amin'ny avatar .. ary koa ilay anananao.
Fuck amin'ny farany LOL !!!
Ho an'ny sary avatar, efa misoratra anarana eto amin'ny tranonkala ve ianao?
Andraso kely aho .. Mahazo mint Linux aho fa rehefa manidy ny terminal aho dia mahazo ahy indray toa ny ubuntu: O
Azo antoka, aza mihazakazaka amin'ny terminal fa mihodina mampiasa [Alt] + [F2] sy voila 🙂
jereo; (akatona ny terminal ary asio ubuntu .. ary mampiasa mint Linux aho
[Alt] + [F2] dia apetrako ity:
/ usr / bin / chromium-browser –user-agents = »Mozilla / 5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit / 535.1 (KHTML, toa an'i Gecko) Linux Mint 12 Chromium / 17.0.963.79 Safari / 535.1 ″%
manokatra varavarankely chromium vaovao ho ahy izy .. manokatra takelaka aho ary mametraka an'ity
chrome: // kinova /
ary mampiseho fa ubuntu izy fa tsy linux mint AJAJAJAJA .. ny browser-ko dia demoniaka amin'ny canonical xD
Akatona ny Chromium rehetra nosokafanao ary ataovy indray ilay zavatra F2
ny zavatra tsy miova foana .. manokatra ahy amin'ny logo linux mint .. fa rehefa akatako ary sokafako indray dia miseho indray miaraka amin'ny ubuntu
Inona no tokony hataoko mba hanamboarana ny mpampiasa? Satria raha sokafako amin'ny alàlan'ny F2 na amin'ny terminal dia asehony ahy ny rafitra ampiasaiko fa rehefa manidy ny browser aho ary manokatra azy indray dia mampiseho ahy ubuntu
Azoko atao ny manova ny fisie:
ok, ahoana ny fanitsiana azy .. satria tsy misy n'inona n'inona ho an'ny terminal, tsy manao na inona na inona ho an'ny F2
Azoko natao ihany tamin'ny farany ny niasa tamin'ny fanampian'i Jhalss sy ny fanampian'ny mpampiasa Agent 🙂
Uff… manadala amin'ny farany, ahoana no nanaovanao azy tamin'ny farany?
Mora be ao amin'ny terminal napetrako:
[quote] mitady chrome.desktop [/ quote]
ary amboary ity manaraka ity.
Tadiavo ny tsipika "Exec = / opt / google / chrome / google-chrome" ary avelao toy izao manaraka izao.
[quote] Exec = / opt / google / chrome / google-chrome –user-agents = »Mozilla / 5.0 (X11; Linux i686) AppleWebKit / 536.5 (KHTML, toa an'i Gecko) Fedora Chrome / 19.0.1084.52 Safari / 536.5 ″% U [/ quote]
Restart Chrome ary miasa ny Agent Agent 🙂
AAHH !! ok ok misaotra betsaka 😀
Misioka azy aho izao hahahaha.
Greenux dia hoy izy:
Mamaly an'i Greenux
Manandrana indray aho
Salama, manana an'i Debian LXDE aho ary tsy mahafantatra ahy ny distro. Novakiako ireo fanehoan-kevitra teo aloha fa tsy vitako ny manamboatra azy! Ao amin'ny terminal sudo nano /usr/local/share/applications/google-chrome.desktop foana izany ary tsy haiko ny mametraka azy. Fanampiana iray sa roa?
maso ivoho mpampiasa
Efa vitako izany, saingy nataoko hafa izy.
Fuck mbola ratsy, mampiasa Chromium aho
alexander mora dia hoy izy:
Valiny tamin'i Alejandro Mora
Manoratra avy any Konqueror, Kubuntu 11.10.
Taorian'ny fanarahana an'io fitaka io dia tsy mandeha ny Chromium 18.0.1025.168, hoy izy tamiko:
"Tsy afaka nandefa" usr / bin / chromium "ny" KDEInit.
Raha ny amiko dia mila manitsy ilay rakitra aho
hanaraka ny fikafika.
Tsy haiko raha mila manova zavatra ankoatry ny "/ usr / bin / chromium-browser" aho.
Ary na dia efa namboariko aza ny tetika, dia mbola tsy manana Chromium aho.
Manantena aho fa tsy mila mamerina mametraka azy io indray, mba tsy hahavery ireo fivoriana notehiriziko ...
Misy fanampiana hanarenana an'i Chromium?
Raha azonao apetraka eto ny atin'ny rakitra izay novainao - » http://paste.desdelinux.net
Afaka mamerina mandinika azy tsara kokoa.
Ampitahiko amin'ny ahy io, dia ho hitantsika eo izay manjo azy.
Reply with quote ^ - ^
Hanolotra izany aho, hizara ny fisie mba hahitana ...
Ny ahy izao (hadino ny nanoratra azy io):
Fa heveriko fa efa namboariko io.
Novako ny kinova Chromium an'ny tetika (Chromium / 14.0.835.202) ho an'ny ahy (Chromium / 18.0.1025.168), misaotra fa nahazo fitandremana aho tamin'ny fanoratana ny kinovako taloha… Ary toa efa nanana Chromium indray aho… Heveriko… antenaiko fa rehefa manokatra azy io indray aho dia mandeha foana ...
Saingy tsy mandeha amiko ny fikafika, hoy hatrany izy amiko etsy ambony hoe manana Ubuntu aho, toy ny taloha nanaraka ilay fika.
Navelako fotsiny izy io, sao hosimbako azy indray.
Torohevitra ho an'ny kubunteros, aza mikasika na inona na inona.
Misaotra nikarakara ahy, admin manana anarana hafahafa 🙂
HAHAHAHAHAHA ahoana no nihomehy tamin'io faran'ny «anarana hafahafa admin»…. TPT!!!!
Raha jerena ny zava-misy fa ny anarako dia tsy tsotra araka ny nieritreretako haha ​​... Mahafinaritra ny mihaona aminao, ny anarako dia Alejandro 🙂
Raha ny marina, rehefa nosoratana ity lahatsoratra ity dia tsy nanome olana i Chromium hanehoana fa kinova hafa izy io, tsy fantatra ny antony mahatonga an'io antsipiriany io ankehitriny O_O ...
Napetrakao ao amin'ny UserAgent ve i Kubuntu ary milaza aminao izy fa mampiasa Ubuntu ianao? Hamarino izany, raha izany dia hojereko indray ilay kaody hahitako izay bibikely tsy hitako.
Ny tianao holazaina dia ny hoe "Debian Chromium /" ho "Kubuntu Chromium /"?
Hanandrana aho, saingy matahotra aho sao hihemotra indray ny famerenana Chromium.
Ary araka ny nolazaiko tetsy ambony, lehilahy aho, ny anarako dia manomboka amin'ny A ...
HAHAHAHAHAHA ahoana no nihomehezako tamin'io faran'ny "anarana hafahafa admin"…. TPT!!!!
Raha jerena ny zava-misy fa ny anarako dia tsy tsotra araka ny nieritreretako haha ​​... faly mihaona aminao, ny anarako dia Alejandro
Avelao ny "saosy" fa bandy bandy i Aliana xD xD
HAHAHA fantatrao fa mitsabo tsara ny rehetra aho haha
Manoro hevitra aho: angamba tokony ampianao amin'ny fika ny hoe manova ny v izy ireo. Chromium ny kaody izay napetrak'izy ireo ...
Nanova ny "Debian Chromium /" ho "Kubuntu Chromium /", ary tsy nisy. Lazainy ahy foana fa ao amin'ny Ubuntu aho.
Nesorina tanteraka tao amin'ny "Debian Chromium /" sy "Kubuntu Chromium /". Tsy misy.
Ankehitriny dia tsy afaka manokatra Chromium avy amin'ny console fotsiny aho, na dia olana Kubuntu / KDE izay hamboariko aza izany rehefa tiako izany.
Farafaharatsiny fantatrao hoe Chromium io, misy zavatra.
Avelantsika izao, tsy ho adala kely ihany koa isika.
bitblu3 dia hoy izy:
mmmm, mpampiasa firefox tsara aho, saingy manome chromium fotoana ary ny marina dia tsikaritro fa mampiasa ny tombotsoan'ny nouveau tsara kokoa noho ny firefox. mahafaly
Valio i bitblu3
fitsapana amin'ny chakra
Manana Chakra napetraka amin'ny Google Chrome aho ary tsy afaka miasa ny Agent Agent, afaka manampy ahy ve ny olona nanao an'io? Mankasitraka manomboka izao
fitsapana Debian + Google Chrome 15
amin'ny / usr / mizara / fampiharana dia tsy misy google-chrome.desktop
raha ny marina dia ao amin'ny /opt/google/chrome/google-chrome.desktop io rakitra io
ny olako dia ny fametrahana ny tsipika izay mitondra mankany amin'ny Debian hatramin'ny http://www.useragentstring.com/pages/Chrome/ tsipika fotsiny no miseho ho an'ny Ubuntu, Windows ary Macosx
eny, amin'ny openSUSE dia miasa izy nefa tsy mifindra na amin'inona na amin'inona, fa tsy mampiasa chrome aho fa chromium
mpangalatra dia hoy izy:
Mamaly an'i Hilojack
Fitsapana an'i Maxton
Fitsapana ny maso ivoho ...
Andao hojerentsika raha izao xD
Drafitra fitsapana B ...
Drafitra fitsapana C, raha manaiky ny LXQt
Fitsapana ny maso ivoho miaraka amin'i maxthon ...
Taorian'ny fanavaozana ny chromium dia novaina ilay mpampiasa manokana, ka manandrana indray aho ...
5ull1v4n dia hoy izy:
Fitsapana aorian'ny fanavaozana
Valio amin'i 5ull1v4n
Fitsapana 2: v
Fitsapana ny maso ivoho mpampiasa ao qupzilla
Ary izao eny?
Manamarina ny fanavaozana ny mpampiasa amin'ny qupzilla
fitsapana ny maso ivoho mpampiasa
Fitsapana fitsapana Fitsapana fitsapana fitsapana
fanandramana ho an'ny mpampiasa mpisolo ambin'ny folo
Mamorona mpikirakira rakitra ho an'i Thunar miaraka amin'ny Zenity